पोस्ट - फोरम, अनलाइन समुदाय, ब्लग र विभिन्न वेबसाइट मा प्रकाशित छन् पोष्ट। सुरुमा यो शब्द मात्र वेब फोरम मा वोग मा भएको छ, र शीर्ष-स्तर स्थान (मूल) विषय भनिन्छ। समय, शब्द लगभग सबैतिर प्रयोग गर्न थाले। धेरै सेवाहरू यो तस्वीर गर्न, भिडियो, संगीत केवल पाठ, तर संलग्न छ तपाईं पोस्ट मा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। अन्य प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो टिप्पणी गर्न एउटा पोस्ट को लेखक संग छलफल, साथै आफूलाई बीच सक्षम छन्।
राम्रो र रोचक पोष्ट बनाउन रहस्य
लगभग सबै सामाजिक सञ्जाल मूल्यांकन छ - यो हप्ता, महिना वा वर्ष को लागि पोस्ट प्राप्त गर्न राम्रो छ। यस्तो अधिकार ती प्रतिवेदनहरू र रेकर्ड सबैभन्दा दृश्य प्राप्त छन् भनेर दिइएको छ, "रुचि" (चिह्न "जस्तै"), यदि र टिप्पणी। त्यो र तिनीहरूलाई रुचि अन्य प्रयोगकर्ताहरू जस्तै सबैभन्दा छन् कि ती छ।
हरेक ब्लगर को सपना - शीर्ष मा हुनेछ जो एक पोस्ट, लेख्न। तथापि, यो गर्न सजिलो छ। नेटवर्क अझै कसैले पढ्ने रहने 99% जो प्राप्त ठूलो हराएको दैनिक सयौं, हजारौं र विविध पोस्ट पनि लाखौं, प्रकाशित। यो लेख्न कसरी सिक्छन् र ध्यान आकर्षित गर्न नयाँ पोस्ट आकर्षित यसलाई सार्वजनिक SPOILED गर्न, सल्लाह र अनुभव लोकप्रिय ब्लगर्स को सिफारिसहरू सुन्न त्यसैले आवश्यक छ।
उज्ज्वल विचार - आफ्नो सफलता को 50%
पहिलो नजर मा, यो केही त्यसैले यसको बारेमा जटिल छ, र, र कुनै पनि विशेष सीप तपाईं आवश्यक सक्छ छाप दिन सक्छ। यो कि सजिलो हुन सक्छ जस्तो थियो? उपयुक्त विषय फेला, प्रेरित र "छिटो" scribbled किबोर्ड वर्ण 500-700 मा। तर यति मात्र प्रयास कहिल्यै भएकाहरूलाई लेख्न र पोस्ट प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ सोच्न। किनभने तपाईं साँच्चै पाठकहरूलाई उतेजित गर्नु हुनेछ भन्ने कुरा आवश्यक खोज को पनि विचार, धेरै हप्ता लाग्न सक्छ। प्रेरणा आकर्षित कहीं हुन सक्छ: अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सबै भन्दा राम्रो पोस्ट मार्फत ब्राउजिङ वास्तविक जीवनमा मान्छे सञ्चार, नियालेर र घटनाहरू विभिन्न विश्लेषण।
रोचक र सरल लेख्न
सम्झना सबै स्थितिहरु कि - यो आफ्नो लेखक व्यक्तित्व के झल्काउँछ छ। तपाईंले केही तथ्य बस छैन व्यक्त गर्नुपर्छ, र तपाईं "catchy", किन यो तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण छ, ख्याल भनी देखाउने, हेर्नुहोस् आफ्नै बिन्दु साझेदारी गर्न। यसरी केहि सरल सुझाव पालना गर्न आवश्यक छ:
जटिल नियम र अस्पष्ट शब्दहरू बिना सरल र बुझ्ने भाषा, लेख्नुहोस्। तपाईं लेखन र व्यक्तिमा कसैले कुरा छन् कल्पना गर्नुहोस्।
उनको राय यसलाई व्यक्त र तर्क गर्न, वास्तविक जीवन उदाहरण ल्याउन र तुलना प्रयोग गर्नुहोस्।
जोगिन शब्दजाल र संक्षिप्त - तिनीहरूले पाठक भ्रममा।
नयाँ के ध्यान, तपाईं मान्छे बताउन सक्छ, र के नयाँ छ पछि आफ्नो पोस्ट पढ्न गर्नेहरूका लागि उपयोगी हुनेछ।
निकै लामो पोस्ट लेख्न छैन। यो पाठक नथाक्न र उसलाई बस अन्य प्रविष्टिहरू जाने गर्नेछ।
यो तपाईं प्रयोग गर्दै सबै जानकारी आज पनि छैन मात्र रोचक, तर सान्दर्भिक थियो महत्त्वपूर्ण छ।
पोस्ट आयोजित भएको तीन स्तम्भहरु
हामीलाई रूसी भाषा को स्कूल पाठ सम्झना गरौं। पोस्ट - यो वास्तवमा, पाठ, टिप्पणी, मिनी लेख। स्वरको आरोह अवरोह, मुख्य भाग र निष्कर्ष: त्यसैले, यो तार्किक तीन भागमा विभाजित हुन अनिवार्य छ।
तिनीहरूलाई को निकटतम, वास्तवमा, स्वरको आरोह अवरोह छ। वास्तवमा, यो परिचयात्मक वाक्य को एक दम्पतीको, उद्देश्य जो को पाठक गरेको ध्यान आकर्षित छ। तपाईं पहिलो शब्दहरूबाट मानव आँखा "फसाउन" गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको पोस्ट बस कुनै एक पढ्न छ। भूमिका र अन्य कम महत्वपूर्ण कार्य छ - यो मन लागि एक सानो कसरत खर्च र शैली पाठक, प्रस्तुति को तरिका सेट गर्न मद्दत गर्छ।
"हृदय" पोस्ट - यो मुख्य भाग हो। पहिलो अनुक्रम र प्रस्तुति तर्क ध्यान छ। आफैलाई काट्न छैन। पाठ को सुरुमा तपाईं अगाडी एक विशिष्ट तर्क राखे भने, भविष्यमा यसलाई संग छडी।
तपाईं एक विशेष मुद्दा हेर्नुहोस् तपाईंको बिन्दु प्रमाणित भने, तर्कको प्रस्तुति क्रम ध्यान। कमजोर बाट बलियो, र उल्टो - - यसलाई प्रत्यक्ष हुन सक्छ कमजोर वैकल्पिक बलियो देखि। आदर्श तिनीहरूलाई बीच traceable सम्बन्ध हुनुपर्छ: त्यो छ, प्रत्येक अतिरिक्त जस्तै अघिल्लो एक देखि stems। कुनै पनि सिद्धान्त तिनीहरूलाई संयोजन गर्न, प्रायजसो मा, तर्क पनि विविध हो: तर, तपाईंले गर्न सक्छन् एक "रेल" निर्माण भने, दुखी छैन।
सबैभन्दा सशक्त यदि पनि, पाठक भ्रमित र उहाँलाई सबै भन्दा राम्रो छाप छोड्न, disparate, प्रत्येक अन्य प्रमाण गर्न असम्बन्धित: तैपनि ग्रेडिंग कुनै पनि मामला अवलोकन हुनुपर्छ।
हेरचाह "stagnate" छैन र, मात्र आफ्नो मौखिक निरूपण परिवर्तन फरक व्याख्याहरु मा नै विचार बारम्बार छैन। तपाईंको सन्देश फसाउन आवश्यक गर्नेहरूलाई, सबै कुरा बुझ्न, र यो बिना। पुनरावृत्ति को एक बारम्बार कारण, बरु रिसले।
एक भावनात्मक धनी, उज्ज्वल कार्यालय लेख्न प्रयास गर्नुहोस्। यसले तथापि एक फोहरा विरोधाभासी, उत्साही epithets मा पाठ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ, र थप केही विश्वविद्यालय पाठयपुस्तक एक अंश जस्तै अक्षर को एक ड्राई सेट, मतलब छैन, यो असम्भाव्य कसैले रुचि हुनेछ। पाठमा Jokes को अनुपात सधैं पाठक लागि यो थप रोचक बनाउँछ।
घृणित कथित स्थितिहरू, जो टिभी श्रृंखला, सबै भन्दा रोचक स्थानको रूपमा, एकाएक बन्द तोड्न। यसबाहेक, उत्तरार्द्ध विपरीत, तिनीहरूले अक्सर जारी छैन, र विचार र अधूरा रहनेछ। त्यो अर्को पोस्ट मा काम खत्म किन, संक्षेप र माथिका सबै generalize गर्न प्रयास छ। यहाँ तपाईं दर्शक गर्न-मिति, "पीडादायी" मुद्दा सोधेर गरेर चर्चा प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्लभ अवस्थामा, कुनै निष्कर्षमा छ जहाँ "संक्षिप्त" मोडेल, प्रयोग गर्न अनुमति, तर यो विकल्प एकदम जोखिमपूर्ण छ।
अब तपाईं शब्द "पोस्ट" र यी टिप्पणीहरू लेखन को मूल कुराहरू को अर्थ थाहा छ, यो आफ्नो डिजाइन बारेमा कुरा गर्न समय। उत्तरार्द्ध, प्रसंगवश, केही अवस्थामा एक निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्।
यदि तपाईंको पोस्ट 300-400 भन्दा बढी वर्ण को आकार, यदि सम्भव भएसम्म, अनुच्छेद 3-4 लाइनहरु प्रत्येक लामो यसलाई तोड्न प्रयास - खैरो "पानाहरू" धेरै थकित रुप र पाठ को पदार्थ ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति छैन।
एक विषयगत तस्वीर पोस्ट संलग्न गर्नुहोस्। यो मान्छे पहिलो स्थानमा यसलाई हेर्न हुनेछ भनेर नबिर्सनुहोस्। त्यसैले, यो केही हास्यास्पद रेखाचित्र, मूल demotivator वा हास्य चयन गर्न मनमोहक छ - के रुचि व्यक्ति, सम्पूर्ण सम्पूर्ण पोस्ट पढ्न उहाँलाई एक मुस्कान र एक शीघ्र कारण हुनेछ।
तपाईं भिडियो थप्न सक्नुहुन्छ। यो उच्च गुणवत्ता को हुन भनेर मनमोहक, राम्रो क्यामेरा मा खिच्नुभयो, रोचक र सूचनात्मक छ। यो एक मूल्य र अवधि छ - धेरै केहि मान्छे 30-40 मिनेट भिडियो हेर्न सामान्य इन्टरनेट सर्फिङ समयमा सेट अप। इष्टतम अवधि - अप5मिनेट।
लक्षित दर्शक तपाईं लेखन छन् जसको लागि विचार गर्न निश्चित हुनुहोस्। आखिर, यो युवा उद्यमीहरू, स्टार्टअपहरू र उर्दी मा आमा शाब्दिक "फरक दुनिया मा बाँच्न" भनेर, विभिन्न भाषाहरू बोल्न र पूर्ण बिभिन्न कुरामा रुचि भन्दै बिना जान्छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, असल स्थितिहरु - साँच्चै हो यसको आफ्नै नियम र रहस्य संग एक कला। निस्सन्देह, कुनै एक तपाईं भर्खरै सिर्जना लाइव जर्नल स्तर स्थितिहरू (वा अन्य कुनै पनि सेवा) जानेछन् एक ग्यारेन्टी दिन हुनेछ। धेरै सार्वजनिक इन्टरनेट, फैशन तपाईं सक्दैन बाटो असर रुझान र अन्य कारक को मूड मा निर्भर गर्दछ। तर लेखक विशेष गरी लगनशील भई काम जो अधिक साँच्चै रोचक पोष्ट, सधैं लक्ष्य मारा र लोकप्रियता हासिल। शुभकामना छ!
रूस र विदेश मा सबै भन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल
शिशुहरू मा Intracranial दबाव: यसको वृद्धि, लक्षण र उपचार को लागि कारण
ग्लोनास के हो र यो कसरी अमेरिकी जीपीएस भिन्न
कति सुन्दर आतिशबाजी आकर्षित गर्न?
चरण मास्टर वर्ग: कसरी कागज देखि एक लिली बनाउन
विश्वव्यापी इलेक्ट्रनिक कार्ड (UEC) - समीक्षा